Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0912 zom
Zoma 30 Nov.
Vakio ny toko 15-18 amin’ny MAGC SDABC.
“Fanompoam-pivavahana masina sy lehibe indrindra ny batisa ka ilaina ny manana fahatakarana tsara sy feno ny heviny. Fibebahana amin’ny ota no heviny ary fidirana amin’ny fiainam-baovao ao amin’i Kristy Jesôsy. Tsy tokony ho zavatra hatao an-kamehana ny fandraisana izany. Aoka ny ray aman-dreny sy ny zanaka handinika tsara ny lanjany.” - TFC, b. 6, t. 93.
“Nanondro ny fanafahana ny zanak’i Isiraely ny Paska, ary natao hanondro sahady an’i Kristy, Zanak’ondrin’Andriamanitra maty ho fanavotana ny olombelona lavo ihany koa. Ny ra natentina tamin’ny tolàm-bavarana dia tandindon’ny ran’i Kristy manavotra sady tandindon’ny fianteheran’ny olombelona mpanota amin’ny famendrehan’io ra io. Azo antoka amin’izany ny fiarovana azy amin’ny fahefan’i Satana ary koa ny fanavotana azy amin’ny farany.” - SP, b. 1, t. 201.
1. Oviana no fotoana farany nanasanao ny tongotry ny olona iray tamin’ny fanompoam-pivavahana fanaovana izany? Nahoana no tena zava-dehibe tokoa io fomba io?
2. Vakio ny 1 Pet. 3:20,21. Inona no fampitahana ataon’i Petera eto ka entiny manampy eo amin’ny fanazavana ny hevitry ny batisa?
3. Maro ireo zavatra nentina niampangana ny Kristianina tany am-boalohany, na dia zavatra tsy nataony akory aza, anisan’izany ny fihinana olona. Anankiray amin’ireo antony maro mikasika izany ny voalazan’ireto andininy manaraka ireto: “Fa hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy mihinana ny nofon’ny Zanak’olona sy misotro ny rany hianareo, dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin’ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary Izaho kosa ao aminy” (Jao. 6:53-56). Inona no ampianarin’i Jesôsy antsika amin’ny alalan’ireo teny ireo? Nahoana no zava-dehibe tokoa ny fahatakarantsika ny hevitra ara-panahy ambaran’ireo andininy ireo?
4. Ifanakalozy hevitra lalindalina kokoa eo amin’ny kilasy ny maha-iraisan’ny rehetra ny Fandraisana ny fanasan’ny Tompo. Inona avy ireo fomba tokony hanampian’izany ny fiangonanao hahatakatra bebe kokoa ny adidintsika amintsika samy isika ary koa amin’ny any ivelany?